Seswekile, yintoni, iintlobo, iimpawu kunye nonyango? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ihlabathi liphela liphethwe sisifo seswekile. Okwangoku kuqikelelwa ukuba malunga nezigidi ezingama-387 zabantu ngaphesheya el mundo banesi sifo.
1 Siyintoni isifo seswekile?
2 Yintoni Ebangela Isifo Seswekile?
3 Kutheni inani labantu abanesifo seswekile likhula kangaka?
4 Kodwa ngaba iilekese, iikeyiki, iipuphu, kunye nantoni na eneswekile ayizibangeli iswekile?
5 Uhlobo lwesifo seswekile se-2?
6 Ungaluthintela njani udidi lwesibini lweswekile kunye nokunciphisa umngcipheko
Siyintoni isifo seswekile?
Isifo seswekile sisifo se-metabolic esibonakaliswa kukuhla kwemveliso ye-insulin ngepancreas kunye nokwehla kwesenzo se-insulin okanye ukumelana ne-insulin kwiiseli.
Yintoni Ebangela Isifo Seswekile?
Zininzi izinto ezibangela le ngxaki:
Ukutyeba kakhulu / ukutyeba kakhulu;
ukutya okune-carbohydrate (ngakumbi icokisiwe, yenziwa kwaye yenziwa imveliso);
I-HDL ephantsi ("cholesterol elungileyo");
Ukusetyenziswa kweziyobisi ezonyusa iswekile yegazi.
Kutheni inani labantu abanesifo seswekile likhula kangaka?
Umtyholwa wokwanda okugqithileyo kwamatyala eswekile uyaziwa. Nditsho okwethu, kuba ikhoyo etafileni yazo zonke iBrazil ... yena: yi-carbohydrate.
Ndiyazi ukuba ucinga ntoni ...
Kodwa ngaba iilekese, iikeyiki, iipuphu, kunye nantoni na eneswekile ayizibangeli iswekile?
Andizukutsho ukuba abayonyusi ithuba lokuba unesifo seswekile kunye nezinye iingxaki zempilo, kodwa ii-carbohydrate zezona ndawo ziphambili ekutyeni kwethu (kwaye sesona sizathu siphambili sezifo ezininzi ezivele kumaxesha anamhlanje) kwaye Siza kuchaza ukuba kutheni.
Namhlanje siyazi ukuba ukusetyenziswa kakhulu kwee-carbohydrate kubangela ukwanda kwempendulo ye-insulin kwezi carbohydrate, kunyusa inqanaba le-glycemic egazini lethu.
Oku, ngenxa yesenzo sokugcina amafutha kule hormone, kukhuthaza ukutyeba kakhulu.
Kwaye, njengoko amawaka ohlalutyo kunye nezifundo zibonisile, oku kuqokelelwa kwamafutha esiswini ("amanqatha e-visceral") kunxulunyaniswa nokudumba okungapheliyo, okunxulunyaniswa ngqo nohlobo lweswekile yesibini kunye nokuhlaselwa sisifo sentliziyo.
IiCarbohydrate zii-macronutrients eziguqula ezona zikhawulezayo kwaye uninzi (100%) lube yiglucose. Ke ngoko, ukusetyenziswa kwayo kufanele ukuba kumodareyithwe kwizigulana ezichongelwe izifo ezifana neswekile.
Uhlobo lwesifo seswekile se-2?
Ngokungafaniyo nohlobo 1, ingxaki ayiqali ngohlaselo lweeseli zokhuselo zepancreas uqobo, umzi-mveliso we-insulin. Uhlobo lwe-2 luqala ngokuchasene ne-insulin, ihomoni enceda iswekile (isondlo sokutya) ukungena kwiiseli.
Ngamanye amagama, le hormone iveliswa kodwa ayinakusebenza ngokufanelekileyo. Ukuhlawula, iipancreas zikhawulezisa imveliso ye-insulin.
Kodwa oku kuza ngexabiso: Ngokuhamba kwexesha, ilungu liyaphela kwaye iiseli ziqala ukusilela. Kude kube lusuku olunye, awusakuqondi ukugcwala komthwalo kulapho iishukela zakho egazini kwaye zihlala ziphakamileyo ngokusisigxina.
Kwixesha elide, i-glucose ephezulu yegazi inokubangela umonakalo omkhulu emzimbeni. Iingxaki zibandakanya ukonzakala kunye namacwecwe kwimithambo yegazi, ethintela ioksijini yamalungu kunye nokwenza ingozi yokuhlaselwa sisifo sentliziyo kunye nemivumbo.
Ungaluthintela njani udidi lwesibini lweswekile kunye nokunciphisa umngcipheko
Ukunciphisa ii-carbohydrate ekudleni kwakho kunokuthintela ukuqala kohlobo lwe-2 yeswekile.
Ukubeka esweni isifo seswekile, ukutya kwe-cholesterol kunye nokutya okunesondlo ngokutya okucocekileyo kwiziqulatho zentliziyo yesondlo kunye nerekhodi lokulawula iswekile yegazi ngesixhobo sokulinganisa seswekile.
Ukuthintela ukusetyenziswa kwee-carbohydrate kunye nokutya okunemveliso kungqineke kulidlelane elihle ekulweni nesifo seswekile.
Emva kokunciphisa ubunzima, ukugcina ukutya kugxile kukutya okwenyani (kunye nokunciphisa ukutya okuphezulu kwe-glycemic kunye neeprotheyini ezingaphezulu) kungqineke njengesicwangciso esiliqili sokugcina ukwehla kobunzima sele kufezekisiwe kwaye ixesha elide kunalo naluphi na olunye uhlobo lokutya.
Oku kwenza ukuba kube nzima kakhulu ukujongana nomngeni kunye nokungahoyi ukusebenza kokutya okune-carb esezantsi kunyango lwe-2 yeswekile (kunye nesibindi esinamafutha).